Traboina amin’ny tapany Avaratry ny Nosy : Sambo feno vary avy amin’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaTraboina amin’ny tapany Avaratry ny Nosy : Sambo feno vary avy amin’ny Filoha
13/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina an-tanana mihitsy ny fandefasana vary sy fanafody ho an’ireo traboina ho an’ireo mponina any amin’iny tapany Avaratry ny Nosy iny, nialohan’ny nidinany ifotony tany amin’ireo toerana ireo ny faran’ny herinandro. Niainga tao Toamasina ny sambo feno vary sy fanafody ary higadona any Maroantsetra amin’ity fiandohan’ny herinandro ity.
Noho ny faharatsian’ny lalana vokatry ny rivo-doza dia hiainga ao Maroantsetra ny fizarana izany vary sy fanafody izany ho an’ireo traboina.
Efa hitan’ny Filoham-pirenena mivantana ny fahavoazana rehetra nanjo ireo mponina ireo. Nidina ifotony tao Antalaha, Maroantsetra, Sambava izy ny andron’ny zoma teo. Hitany tamin’izany ny tokony hanarenana maika ireo fotodrafitrasa toa ny Lycée Horace François ao Antalaha izay potiky ny rivodoza Enawo. Hanaovana asa tana-maro kosa ny fanadiovana faobe ny tanàna. Nivimbina tafo fanitso miisa 1 000 ho an’ireo traboina tao Antalaha ny filoha tamin’io fandalovany io. Nanome toromariky an’ireo tompon’andraikitra eo an-toerana koa izy mba hanarenana haingana ny hopitaly sy ny hiverenan’ny herinaratra amin’ny laoniny. Mikasika ny fandalovan’ny filoham-pirenena tao Maroantsetra kosa dia nisy ny fanolorany kojakoja fampiasa an-dakozia, vilany 500 isa, sotro 500 , vilia 500 isa, voamaina 50 gony, ary vary 240 kitapo.
Taorian’ny fijerena ifotony an’ireo fahavoazana nateraky ny rivodoza Enawo iny dia namory an’ireo delegasiona (praiminisitra sy ny mpikambana teo anivon’ny governemanta) sy ny olomboafidy tao amin’ireo faritra notsidihany ireo ny Filoham-pirenena. Tokony handray andraikitra avy hatrany ireo tompon’andraikitra rehetra eo anatrehan’ny fidangan’ny vidin’entana noho ny fanararaotana hataon’ireo mpamongady sasany. Raha 1 200 ariary ny kilaon’ny vary tonga ao Toamasina, dia tokony ho 1 260 ariary izany ao Antananarivo ary 1 360 Ariary any Mahajanga. Tsy ekena ny vidim-bary mananika ny 2 000 ariary. Tsy maintsy hisy ny fepetra hentitra raisina amin’ireo mpanararaotra. Efa eo am-pelatanan’ny Filoha avokoa ny tatitra rehetra momba ny takaitra navelan’ny Enawo. Alefa araka ny laharam-pahamehana ny fanarenana an’ireo fotodrafitrasa ka ny sekoly sy ny hopitaly no harenina voalohany. Manomboka amin’io volana Avrily io ny asa. Manaraka azy eo kosa ny fanarenana ny lalana sns…
Tokony hihetsika avy hatrany kosa ireo tompon’andraikitry ny minisiteran’ny Varotra ao Antalaha manoloana ny mpanararaotra izay tsy mitsahatra mampiakatra vidin’entana. Tafiditra ao anatin’ny toromarika nomen’ny Filoha azy ireo izany. Tsy anjaran’ny Filoha kosa angamba no hidina hanara-maso an’ireny mpijirika sy mpanararaotra ireny fa efa samy manana ny andraikiny ny rehetra. Raha ny fantatra, dia efa mananika ny 3 000 ariary ny kilaon’ny ovy any Antalaha.